» “त्यत्तिकै त चितवनमा सबैको ध्यान गएकाे हाेइन नी”! – प्रचण्ड “त्यत्तिकै त चितवनमा सबैको ध्यान गएकाे हाेइन नी”! – प्रचण्ड – हाम्रो खबर
“त्यत्तिकै त चितवनमा सबैको ध्यान गएकाे हाेइन नी”! – प्रचण्ड
चितवन।आफू र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सिध्याउनकै लागि एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको बताउँदै आएका प्रचण्डले भरतपुरमा सोमबार ६ जना मन्त्री उतारेर ‘विकास बहस’ गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रचण्डले संघका चार र प्रदेशका दुई मन्त्री भर¥तपुरमा ल्याएर विकास बहस गरेका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको आयो¥जना भनिए पनि नजिकिँदो स्थानीय तहको चुनाव र एमालेको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर समृद्ध भरतपुरको लागि विकास बहस नामक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । बहस कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुषाल, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, बाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सालिकराम जम्कट्टेल र आ¥न्तरिक मामिलामन्त्री कृष्ण खनाल आएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यतिबेला देशका धेरै मानिसको ध्यान चितवनतर्फ रहेको भ¥न्दै चितवनमा पक्कै केही कुरा लुकेको बताए । ‘अब चितवनमा के हुन्छ ? भनेर सोध्छन् । भोजपुर गयो त्यही छ, सर्लाही गयो त्यहि छ, महोत्तरी, रौतहट गयो त्यही छ । भनेपछि चितवनमा पक्कै केही छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै त चितवनमा सबैको ध्यान गएकाे हाेइन नी ।’
कुनै दललाई आरोप लगाउने मुडमा नरहेको भन्दै उनले सबैले चितवन रोज्नुमा पनि के¥ही कुरा लुकेको हुनसक्ने बताए । भरतपुर महानगरपालिकामा भएको विकासको यात्रा भत्किन नहुने उनले बताए । महानगरपालिकाको विकासका निम्ति रेणु दाहालको समर्पणबाहेक अन्य केही स्वार्थ नरहेको उनले दाबी गरे । ‘हाम्रा मित्र हुन् वा आलोचक । या वि¥रोधी हुन् । सबैको निम्ति चितवन भन्ने भएको छ । त्यसले हामी सबैको जिम्मेवारी बढाएको जस्तो लाग्छ मलाई,’ उनले भने, ‘अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरूलाई कसरी परास्त गर्ने होला । विकास र समृद्धिको यात्रालाई डिरेल गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई कसरी प¥रास्त गर्ने होला ? भन्ने चासो, जिज्ञासा र जागरुकता बढ्नुपर्ने भएको छ ।’
गठबन्धनको सरकारले चितवनमा ना¥रायणी र राप्ती नदी तटबन्धन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा, रंगशाला निर्माणलगायतका विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर ग¥रिरहेको उनले बताए । किसानसँग विश्वविद्यालय कार्यक्रममा पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेर देशभर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘८-१० वर्षभित्र चितवनमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने र चितवनमार्फत देशभर ल्याउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यो समृद्धिको न¥याँ युग निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा हो ।’
‘नेतृत्वलाई समाप्त पार्न एमालेको कुम्भ मेला’-प्रतिगमनका माध्यमबाट माओवादीलाई सिध्याउन नसकेपछि माओवादीको नेतृत्वलाई नै समाप्त पार्ने दुरासयले एमाले लागेको उर्जामन्त्री पम्फा भुषालले आ¥रोप लगाइन् । ‘नेतृत्वलाई समाप्त पार्न यही भरतपुरलाई नै थलो बनाउन लागेको हामीले देखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘केही दिनमै नारायणी किनारमा एक प्रकारको कुम्भ मेला हुँदैछ भन्ने सुनेको छु ।’
राजनीतिक परिव¥र्तनमा चितवनले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै उनले अब पनि चितवनले प्रतिगमनलाई साथ नदिने विश्वास व्यक्त गरिन् । चितवनको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने काममा कुनै ढिलाई हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘नारायणीमा तटबन्धन गर्नका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ । केही दिनमै टेण्डरमा जान्छौँ र यही वर्षभित्रै तटबन्धनको काम सुरू गर्नेछौँ’, उनले भनिन्।
भरतपुर महानगर¥पालिका निर्माणको चर¥णमा रहेका र आगामी आयोजनाको लागि बजेटको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रतिबद्धता जनाए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र इर्श्या गर्न लायक भइसक्यो । वि¥कासले तीव्रता पाएको छ,’ उनले भने, ‘नारायणी नदी तटबन्धनको लागि अर्थ मन्त्रालयले उचित बजेटको व्यवस्था गर्न जानेका छौँ । त्योअघि बढ्छ ।’